Toeram-Pisakafoanan’ny Voromahery Vaotoro Ao Nepal, Manampy Amin’ny Fiverenan’ny Biby Sy Ny Fidiram-bolan’ny Vondrom-piarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Toeram-Pisakafoanan'ny Voromahery Vaotoro Ao Nepal, Manampy Amin'ny Fiverenan'ny Biby Sy Ny Fidiram-bolan'ny Vondrom-piarahamonina
Voadika ny 29 Janoary 2018 17:38 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, македонски, Español, 繁體中文, Deutsch, Italiano, English
Girifao (griffon) Himalayana ao amin'ny Toeram-Pisakafoanan'ny Vaotoro, Nawalparasi, Nepal. Sary avy amin'i Sagar Giri. Nahazoana alalana.
Ngezabe, ratsy tarehy ary malaza ratsy izy ireo. Na dia ao anatin'ny fifandraisana mankahala-fitiavana amin'ny olombelona aza ny voromahery vaotoro – namantsika voajanahary ihany koa izy ireo. Mpihinana fatim-biby ny ankamaroan'ny vaotoro ary ampahany lehibe amin'ny fizotry ny fahafatesana voajanahary any an'ala. Mihinana nofo be dia be ireo biby ireo ary manampy amin'ny famerana ny fiparitahan'ny bakiteria sy ny aretina izay mety miparitaka avy amin'ny fatim-biby efa potipotika. Na izany aza, na dia eo aza ny anjara asany manan-danja toy ny mpiaro miady amin'ny ny mety hiparitahan'ny aretina, matetika heverin'ny olona toy ny voalavo fa tsy vorona manan-danja izy ireo.
Araka ny nasehoan'ny fitsapan-kevitra tamin'ny taona 2007 tany India, nihena hatramin'ny 0,1% ny isan'ny vaotoro fotsy tatsinanana (Gyps bengalensis) tamin'ny fiandohan'ny taona 1990. Tamin'ny taona 2009, nahita i Nepal andrefana fa nihena 25% nanomboka ny taona 2002 ny vaotoro fotsy tatsinanana. Toy izany koa, nihena tanteraka ny vaotoro lava molotra (Gyps indicus) sy ny vaotoro manify molotra (Gyps tenuirostris) . Indrisy fa tsy any Azia Atsimo irery ihany no misy tahaka izany, mihena manerana izao tontolo izao ny isan'ny vaotoro noho ny tsy fahampian'ny sakafo, ny fifandonana amin'ny fitaovana namboarin'olombelona, sy ny fanapoizinana, ankoatra ny hafa.
Mba hiadiana amin'ity fihenàna ity, nanolotra drafi-piarovana mahaliana ny firenena sasany mba hamerenana ny isan'izy ireo – toeram-pisakafoanana Jatayu, na toeram-pisakafoanana ho an'ny vaotoro.
Toeram-pisakafoanana ho an'ny vaotoro tantanin'ny fiarahamonina
Ho fitehirizana ireo vaotoro, napetraka ao amin'ny firenena Aziatika maromaro tahaka ny an'i Kambodza, India, Pakistana ary Nepal ny toera-panomezan-tsakafo ho an'ny vaotoro. Tantanin'ny vondrom-piarahamonina tsy lavitra eo ny toera-panomezan-tsakafo any Nepal ary nomena anarana hoe toeram-pisakafoanana Jatayu, anarana avy amin'ilay olo-malaza be mpanaja tamin'ny vanim-potoana Haindò Ramayana sy ny anarana Sanskrit manondro ny vaotoro, Jatayu.
If you are in Nepal & a wildlife enthusiastic, visiting Jatayu Restaurant will be an experience of lifetime. I was mesmerized. #conservationhttps://t.co/rENmDgrkkE
Raha any Nepal ianao ary mankafy biby, ho fianarana mandritra ny androm-piainana ny fitsidihana ny toera-pisakafoanana Jatayu. Tena valalanina aho.
Mamelona biby antitra sy tsy mamokatra intsony avy amin'ny tantsaha ireo toerana fisakafoanana ireo ary mikarakara ny biby fiompy mandra-pahafatiny ao amin'ny foiben'ny biby efa antitra. Manolotra am-pifaliana ny ombin'izy ireo efa antitra, tsy mamokatra intsony, any amin'ireny toeram-pisakafoana ireny ny olona satria tsara fikarakarana ny biby mandra-pahafatiny.
Zava-misy ao amin'ny toeram-pisakafoanana vaotoro ao Nepal Andrefana– omena ho an'ireo vaotoro ao amin'ity toerana ity ny biby efa maty rehefa azo antoka fa tsy misy diclofenac intsony ny tsikalakalan-taolana. Maty ny vaotoro noho ny fampiasana ity fanafody ity amin'ny fitsaboana biby fiompy. Nihena ny isan'ny vaotoro hatramin'ny nahafatesan'ny vorona mampalahelo noho ny aretin'ny voa vokatry ny fihinana tsikalakalan-taolana misy diclofenac. Taorian'ny fametrahana ireo trano fisakafoanana manerana ny lemaka atsimon'i Nepal, niverina ireo vaotoro. Ary faly ireo mpiaro ny tontolo iainana!….
Rehefa maty ireo biby fiompy, dia omena hohanin'ny vaotoro — rehefa avy natao andrana mba hiantohana fa tsy misy diclofenac ilay fatim-biby.
Diclofenac, fanafody mpamono nahatonga fahafatesana faoben'ny vaotoro
Ny fampiasàna diclofenac mba hanamaivanana ny fanaintainan'ny biby fiompy no iray amin'ireo antony lehibe amin'ny fahafatesana faoben'ny vaotoro any Nepal, India sy firenena Azia Atsimo hafa. Na dia diclofenac kely fotsiny aza dia mety hampidi-doza ho an'ny vaotoro, miteraka aretin'ny voa amin'ireo vorona ireo. Satria tsy mahavita miasa intsony ny voa, dia miangona ao amin'ny ràn'ny vorona ny asidran'ny amany ary miely manerana ny taova anatiny.
Satria vondrona vaotoro marobe no miara-omena sakafo, mety hiteraka fahafatesana vaotoro be dia be ny tsikalakalan-taolana tokana misy diclofenac.
Voaràra any India, Nepal ary Pakistana tamin'ny taona 2006 sy tany Bangladesh tamin'ny taona 2010 ity fanafody ity. Noho ny fandraràna ny fanafody sy noho ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fikambanana maromaro, anisan'izany ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana, nanomboka niverina ireo karazam-borona natahorana ho lany tamingana ireo.
Ankoatra izany, nanjary nanintona mpizahatany ao an-toerana sy iraisampirenena ireo toeram-pisakafoanana ireo, manome fidiram-bola fanampiny ho an'ny vondrom-piarahamonina manodidina. Nanomboka nivarotra hoditr'omby hanaovana famokarana hoditra sy taolana ho an'ny zezika ihany koa ireo vondrom-piarahamonina ireo.
Satria niha-nalaza ny toeram-pisakafoanana Jatayu ary mbola miteraka fidiram-bola ho an'ny vondrom-piarahamonina mpifanolo-bodirindrina, manomboka manova fijery ny olona izay nankahala sy nanalavitra ny vaotoro taloha. Miadana saingy azo antoka, manomboka miova amin'ny fahatakarana tsara kokoa amin'ny andraikitr'ireo (vorona) manan-danja amin'ny vanim-potoan'ny fiainana sy ny fahafatesana ny laza ratsy izay namely ireo vorona ireo .
Traikefa tsy hay adinoina ny fijerena ireo vaotoro mena loha 150 #himalayan omena sakafo tsikalakalan-taolana ao Himalayas. Tena zava-dehibe ny manohana sy miaro ireo biby mahavariana ireo.
Raha liana amin'ny fijerena akaiky ireo vorona goavana ireo ianao dia afaka mitsidika ny iray amin'ireo toeram-pisakafoanana Jatayu izay tarihan'ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny distrikan'i Nawalparasi, Rupandehi, Dang, Kailali ary Kaski.